Be proud of your work – Saturngod
အခု စာရေးတဲ့ အချိန်က စင်္ကာပူမှာ ည ၁ နာရီထိုးနေပြီ။ မနက်ဖြန် တနင်္လာ ရုံးပြန်တက်ရတော့မယ်။ ဒီ အပတ် စနေ တနင်္ဂနွေ ရုံး အလုပ်နဲ့ပဲ အချိန်ကုန်သွားတယ်။ အင်္ဂါ နေ့ client ကို ပေးရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ပြီးအောင် လုပ်လိုက်ရတယ်။ တော်သေးတာကတော့ အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်လို့ ရတာပဲ။ Weekend တွေဆိုရင် ရုံးမသွားချင်ဘူး။ ရုံးသွားရတာထက် အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်ရတာ ပိုသဘောကျတယ်။
အဓိက ပြဿနာက product က ထင်သဘောက် မပြီးတော့ နောက်ဆုံး ကျွန်တော့် လက်ထဲ ရောက်လာပြီး လောလော နဲ့ လုပ်ခိုင်းတာပဲ။ အိန္ဒိယ ရုံးခွဲက လူတွေ က အလုပ်မလုပ်တာလည်း ဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး။ လုပ်တယ်။ ခက်တာက ထင်သလို မရဘူး။ ဖြစ်နိုင်တာက communication အားနည်းတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ နောက်ပြီး စဉ်းစားမိတာက သူတို့ တွေ အလုပ်ကို အလုပ်လို သဘောထားပြီး လုပ်တာလား ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ product ကို ကိုယ်ဂုဏ်ယူ စိတ်ရှိရဲ့လား ဆိုတာလေးပဲ။
ဒီအတွေးလေး တချက်ဝင်လာတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ပြန်မေးကြည့်တယ်။ ကျွန်တော် လုပ်ထားတဲ့ product တွေထဲမှာ ဘယ်ဟာကို ဂုဏ် အယူဆုံးလဲပေါ့။ တချို့ product တွေက သေးသေးလေးပေမယ့် သဘောကျတယ်။ ဂုဏ်ယူတယ်။ ငါကွ ဆိုပြီး ပြောရဲတယ်။ တချို့ product တွေက ထင်သလောက် မဟုတ်ဘူး။ မကျေမနပ်မှုလေးတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီလို product တွေရဲ့ အချိန်ကို ပြန်စဉ်းစားမိရင်
၁။ ကိုယ်တိုင် မကျွမ်းကျင်ပဲ ဟိုဖတ်ဒီဖတ် ဟိုကူးဒီကူး ရေးထားတာတွေ။
၂။ အချိန်ကို မလောက်ပဲ ပြီးမယ်ဆိုပြီး ပြောမိတာတွေ
၃။ ထင်တာထက် ပိုကြာသွားတဲ့ project တွေ
အဲဒီ လို projects တော်တော်များများက စိတ်တိုင်း မကျခဲ့ဘူး။ ကိုယ်ပိုင် project ထဲက စိတ်တိုင်း မကျတဲ့ project ဆိုရင်တော့ တစ်ခု မှ မရှိဘူး။ ကျွန်တော် လုပ်ချင်တာ အရမ်းများတဲ့အတွက်ကြောင့် ornagai , ornagaime ,garader , dhstream စတာတွေက အကုန် perfect မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ version 2.0 ထိ စဉ်းစားထားတဲ့ အတွက် perfect မဖြစ်တာဆို ပိုမှန်ပါတယ်။ version 1.0 ထိဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့် ကိုယ်ပိုင် app တွေ အကုန်လုံးကို သဘောကျတယ်။ version 2.0 ထိဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် လိုချင်တဲ့ အဆင့် ကို မရောက်ခဲ့ဘူး။ အချိန် အပြည့် အဝ မပေးနိုင်တာကြောင့် လည်း ပါတာပေါ့။
ကျွန်တော် တို့တွေ တစ်ခါတစ်လေ အလုပ်ကို အလုပ်လို့ သဘောထားမိသွားတယ်။ အဲဒီ အခါ ထွက်လာတဲ့ product ရလာတဲ့ result က မကောင်းတော့ဘူး။ ကိုယ့် product ကို ကိုယ်ဂုဏ်ယူနိုင်လောက်မှု မရှိဘူးဆိုတာ တော်တော် ဆိုးတယ်လို့ ဆိုရမယ်။ ကိုယ်လုပ်တဲ့ project တွေကို ကိုယ် ဂုဏ်ယူရဲတဲ့ သတ္တိ ရှိရမယ်။ ဥပမာ။။ app ရဲ့ design က အရမ်းကောင်းနေတဲ့အခါ ငါဆွဲထားတဲ့ design ကွဆိုပြီး ကြွားရဲဖို့ လိုတယ်။ app ရဲ့ backend ပိုင်းက ကောင်းနေရင် backend တစ်ခုလုံးကို ငါ ရေးထားတာဆိုပြီး ကြွားရဲဖို့ စိတ်လေးတွေ ရှိရမယ်။
အခု လုပ်နေတဲ့ project က ၂ ပတ်ပဲ အချိန်ရပေမယ့် သဘောကျတယ်။ တော်တော်လေးကို မဆိုးဘူးဆိုရမယ်။ Core Graphic ပိုင်းတွေကို လုံးဝ မသိပေမယ့် လေ့လာရတယ်။ ကျောင်းတုန်းက သင်ခဲ့တဲ့ Matrix သဘောတရားတွေကို နားလည်လာတယ်။ Matrix ဘာကြောင့် သင်ရလဲဆိုတာကိုလည်း သိလာတယ်။ ဒီ project က အချိန် မလောက်ပေမယ့် စိတ်ကျေနပ်တယ်။
နောက်ပြီး ကျွန်တော် လုပ်ခဲ့တဲ့ Goinout app ကိုလည်း သဘောကျတယ်။ Backend ကော front end ပိုင်း ၂ ခုလုံးကို အချိန် ၂ လ အတွင်းမှာ ရေးခဲ့တဲ့ အတွက် perfect မဟုတ်ပေမယ့် တော်တော်လေးကို ကောင်းမွန်တဲ့ app လို့ ဆိုနိုင်တယ်။ app ရဲ့ quality ကတော့ perfect မဟုတ်ပေမယ့် ရလာဒ်ကိုတော့ ဂုဏ်ယူတယ်။
အလုပ်ကို အလုပ်လို့ သဘောမထားပဲ ဂုဏ်ယူစရာ တစ်ခု ဖန်တီးနေတယ်လို့ သတ်မှတ်မိတဲ့ အခါမှာ အလုပ်လုပ်ရတာ ပိုပြီး ပျော်ရွှင်လာသလို product ရဲ့ quality ကလည်း သိသိသာသာ တိုးတက်လာပါတယ်။ Code Review တွေကို ကြည့်တဲ့ အခါမှာ သူဘာကြောင့် ဒီလိုရေးထားတယ်ဆိုတာကို တီးမိခေါက်မိလို့ ရပါတယ်။ အလုပ်လုပ်အောင်ပဲ ရေးထားတာလား။ တကယ် စိတ်ဝင်တစား ရေးထားတာလား။ ဒါမှမဟုတ် အမြန် ရေးထားတာလားဆိုတာက code တွေ မှာ အများကြီး ပေါ်လွင်ပါတယ်။ code တွေကိုတော့ ဘယ် user မှ မမြင်ရပါဘူး။ သို့ပေမယ့် အခြား programmer တွေ developer တွေက မြင်နိုင်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ developers တွေက code ကို အများကြီး သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် open source code တွေကို ဖတ်ကြည့်ရင်လည်း သင်ယူစရာတွေ လေ့လာစရာတွေ အများကြီး တွေ့နိုင်ပါတယ်။ developers တွေ အများကြီး ပေါင်းရေးထားပေမယ့် code တွေက ရှှုင်းလင်းတယ်။ ဖတ်လိုက်တာနဲ့ နားလည် လွယ်တယ်။ CodeIgniter ရဲ့ core ကို အချိန်ရရင် လေ့လာကြည့်ပါ။ သဘောကျစရာတွေ စဉ်းစားဖို့ နည်းလမ်း အသစ်လေးတွေ core ထဲမှာ ပါပါတယ်။ open source project တွေမှာ contribute လုပ်တဲ့ လူ တော်တော်များများက ဝါသနာပါလို့ လုပ်ချင်လို့ လုပ်ကြတာပါ။ သူတို့ရဲ့ code တွေက ပြီး ပြီးရော ရေးထားတာတွေ မဟုတ်တာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ လူနားလည်အောင် ကြိုးစားပြီး ရေးထားတာကို တွေ့နိုင်တယ်။ သူတို့တွေအနေနဲ့လည်း contribute လုပ်ရတာကို ဂုဏ်ယူနေကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့လည်း ကိုယ် ရေးထားတဲ့ product ကို ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် ဂုဏ်ယူနိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့ လိုပါတယ်။
« Steve Jobs MVC »
သူများ ေရေးထားတဲ့ Code ေတွေကေို iOS App ထဲကေနေဘယ်လိုများြကြည့်လို့ရသလဲခင်ဗျ။နည်းရှိရင်ေပေးပါဥဦး။
you can only read non compile file. After compiling , you can’t read. For learning , you can read from some of the opensource project like MKNetwork Kit. MKNetwork kit isaopensource. His code is really clear.
ကိုစေတန်တို့လို ငါကွလို့ ကြွေးကျော်နိုင်ဖို့ကတော့ အတော်လေးကြိုးစားရအုံးမယ်။
Products တွေအားပေးနေတယ် :)
Nice post and good mindset.
I am just starting to write app for Myanmar people.
How can I kick start ?
Do you have any post about how to write an iPhone/iPad app ?
You have experienced about programming?
If you already experienced in like JAVA,DotNet,Python…etc,
you can easily learn from online.
There are alot of tutorials for iOS .
By the way what is your real name,I thought your name is like my old friend.Sorry if i bother you!
I have many years programming experience in C,C– , little in Java, little in .net , PHP and JSP .
I need iOS tutorial . I should say that I learn pretty fast.
But I need iOS projects based tutorial.
Can anyone give mealink for projects based iOS tutorial ?
I am start reading it.
I want the app like windows desktop program.What I mean is that after install the app, the iPhone/iPad does not require to connect online. The app will come with small database like sqlLite.And the app will work fine with offline connection.
Any link for that kind of projects based examples ?
Yes, sqlite support in iOS SDK. check https://github.com/ccgus/fmdb.
Appreciate if you could explain more about of the link you provide:
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ code ရေးတတ်နေဖို့ပဲလိုတာမဟုတ်ပါဘူး… အဲ့ဒီ code တွေကို ချစ်မြတ်နိုးတတ်ဖို့လည်း အများကြီးလိုနေပါသေးတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာက code ကို အလုပ်လို့သဘောထားနေကြသေးတုန်းပဲ။ Code ရေးတဲ့ developer တစ်ယောက်က ကိုယ်ရေးနေတဲ့ code တွေကို ချစ်သူတစ်ယောက်လို သဘောထားနေသေးသ၍ကတော့ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်သေးဘူး။
p.s. Nice Post bro! thumbs up! ^^
I’m not building my empire. I’m not building my kingdom. However, I’making of my own life. I rule my life.